Iphepha leNdebe, iphepha lephepha, iphepha lebhakethi-iJAHOO
Wamkelekile kwi Ipakethe yeJiangxi Jahoo
I-Jiangxi Jahoo Pack Co, Ltd. yenye yezinto ezihamba phambili e-China, egxila kwiindidi ezahlukeneyo zokuprinta kunye nokupakisha iimveliso, kubandakanya iikomityi zephepha, ukutya okuthatha ipakethe, ibhokisi lephepha lombala, ibhokisi yesipho, ibhegi yephepha, ikhadibhodi yokubonisa ume & ibhokisi, ikhathalogu, imvulophu, njl njl.
Sinezixhobo ezininzi eziphambili, ezinje ngoomatshini abayi-2 RAND, oomatshini abanemibala emine, oomatshini bokushicilela be-UV, oomatshini bokuzenzekelayo abazenzekelayo, oomatshini bephepha abanamandla onke kunye noomatshini ababopha iglu ngokuzenzekelayo. Inkampani yethu ineenkqubo zokulawula ukuthembeka kunye nomgangatho, iinkqubo zokusingqongileyo kunye neenkqubo zolawulo lwentsimbi enzima.
Sisebenza ngoxanduva kunye nokunyaniseka, sihlala siqinisekisa ukuba izinto ezifanelekileyo ziyenziwa ukumela inkampani yethu ngokufanelekileyo
Samkela uthotho lwezinto zokucoca ukuqinisekisa ukuba iimveliso ziyahlangabezana neMigangatho yezeMpilo kunye nezokhuseleko.
Ihowuliseyili emhlophe ezilahlwayo ukusela lehoseyile biodeg ...
Ngokubanzi, imveliso inokuba neephakeji ezininzi. Ingxowa yamazinyo equkethe intlama yamazinyo ihlala inebhokisi ngaphandle, kwaye ibhokisi yekhadibhodi kufuneka ibekwe ngaphandle kwebhokisi yezothutho nokuphatha. Ukupakisha kunye nokuprinta ngokubanzi kunemisebenzi emine eyahlukeneyo. Namhlanje, umhleli ...
Ingxowa yokupakisha kulula ukuyiphatha kwaye inokusetyenziselwa ukubamba izinto. Izinto ezahlukeneyo zemveliso, ezinje ngephepha lekraft, ikhadibhodi emhlophe, amalaphu angalukwanga, njl njl. Ngaba uyalazi udidi oluthile lwebhegi yesandla? 1. Izingxobo zokupakisha ezikhuthaziweyo Izingxobo zokupakisha ezenzelwe ukuthengisa ziyilelwe ngep ...
Ukupakisha kweMveliso kuthunyelwa kwiibhokisi, iibhokisi, iibhegi, i-blisters, ukufakwa, izitikha kunye neelebheli njl. Ngaphandle komsebenzi wokhuselo, imveliso pa ...